Ndizive Ndisekhaya - I-Airbnb
Indawo yam ikude nendawo ephithizelayo kodwa ikufutshane neendawo zokutyela, iindawo zokubhaka kunye nezibhedlele. Ilungele iintsapho eziza ngamaqela okanye izibini ezifuna izibonelelo ezipheleleyo kunye nemfihlo kubunewunewu. Le flethi ineendawo zokulala ezitofotofo, itafile yokutyela, ikhitshi elixhotyisiweyo kunye neshawari.
Silungele naluphi na uhlobo lolwazi olufunekayo ukuhlala ixesha elide kwiinkampani njengendlu yeendwendwe okanye iklasi yezoshishino eziza kwizabelo zomsebenzi.
Ifulethi likumgangatho woku-1 kwaye ufikelela kwizinyuko. Indlu yenzelwe ukuba ilungele yonke iminyaka kunye neentlobo ezinefanitshala yesitayile sobukoloniyali. Iibhedi kumagumbi omabini zinkulu King. Umatrasi womgangatho owongezelelweyo unokubonelelwa ngeendleko ezongezelelweyo. Ikhitshi ineketile, iheater, imicrowave kunye nefriji. Iinqanawa zokufudumeza induction ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe. Iziqholo, ii-cutleries, glassware, pickle jars, iikesi zetyuwa kunye nepepile, njl.njl zonke ziyafumaneka ekhitshini. Okona kubalulekileyo kukuba sihlala nje kufuphi, ngoko ukuba kukho nantoni na efunekayo, siya kukuvuyela kakhulu ukwabelana nabanye.
4.75 · Izimvo eziyi-102
Ndwendwe ezithandekayo, igama lam ndinguMamta Fomra. NdinguMyili weFashoni ngokomsebenzi kwaye ndisebenza ukusukela ngo-1995. Ndinevenkile eVishal- De- Mall, eMadurai kwaye ndithengisa ngegama lebrendi ye-MAMTA FOMRA. Ndifundisa iindlela ezahlukeneyo zobugcisa njengokuyila, ukudaya, ukuprinta iibhloko, ukuhombisa kwaye ndiqinisekise ngokufanelekileyo ngeZiko lam elingu-Mamta Fomra Institute of Fashion Management and Arts. Sinezifundo zoYilo lweFashoni ngeInnovation, Entrepreneurship kunye noLawulo. Ndonwabile emtshatweni kwaye umyeni wam ngusomashishini.Ndisikelelwe ngabantwana aba-2, ngoku baqhuba imfundo yabo eNew Zealand.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ngazo naziphi na izinto eziluncedo ezifunekayo kodwa ezingakhankanywanga kuluhlu. Siya kuvuya ngakumbi ukwandisa.
Ndwendwe ezithandekayo, igama lam ndinguMamta Fomra. NdinguMyili weFashoni ngokomsebenzi kwaye ndisebenza ukusukela ngo-1995. Ndinevenkile eVishal- De- Mall, eMadurai kwaye ndithen…